Ndakaita kudzvura beche kusvikira ndakunzwa kuda kutunda! - Masasi eHarare
DzeBonde Ndakaita kudzvura beche kusvikira ndakunzwa kuda kutunda!
Pandainge ndine 18 years ndakapedzisira ndakugara nesister yangu yainge ine 25 years, apa vaive nemwana one musikana. Pataikura ndaigara ndakapfeka pant kana maboxer everytime ndichifamba mumba saka pandikasvika kumba kwavo ndainge ndisingatombofunga nezvazvo.
First night tapedza kudya ndakayenda kunogeza then ndokudzoka muliving room ndakapfeka bhurugwa chete ndokugara ndichiwona TV, sisi vangu was shocked pakutanga but I reminded him kuti vakandiwona ndakapfeka bhurugwa kakawanda stereki.Sisi vangu vakabva vayenda kunorarisa mwana ndokubva vanogeza. Ndainge ndakarara hangu pasofa TV iri On and ndiro light rega rainge riri muroom imomo, sisi vangu vakadzoka vachibva kunogeza vakapfeka kanight shirt ndokubva vagara paside pangu pasofa ndokunditi do you remember pawaindipa massage tiri vadiki, I smiled and said that I did.
Vakandikumbira kuti ndivape massage ndikavati rarai pasi nedumbu, pavairara pasi vakabvisa night shirt yavo ndokusara vakapfeka pant chete. Sisi vangu vainge vakusapfeka macotton pant vakupfekawo ma lace red bhurugwa anosiya corner yemagaro iripanze, I ask what she was doing she smiled and said hanti wakawona pant rangu kakawanda tichikura. Some how in my mind, ndakazviudza kuti I can go far navo ndikawona munhu ayita kuvhura makumbo a bit ndikabva ndaisa mawoko angu pakati ndokubva ndagumha beche rake zvishoma. Sisi vangu vakaridza kamwe kamhere kekunakirwa ndokubva ndadzokera ipapo ndichiisa ruwoko rwangu pamusoro pepant ndichipuruzira beche ravo rainge rakazvimbirira.
Ndakabvisa bhurugwa ravo a bit ndichisiya magaro panze, vainge vanemagaro akanaka mhani. Vakandibvunza kuti urikuitei ndikati relax you will have a good time, pandikadaro zvakabva zvanzi saka bvisa bhurugwa rese ndokubva ndabvisa pant ravo. Vakamuka ndokubva vandibvisa bhurugwa ndokutanga kubonyora mboro yangu zvishoma, I leaned in ndokubva tatanga kukisana. She pulled away zvikanzi we could never tell anyone, ndikati aaah ahhh never mama vakazvinzwa tinourayiwa. Takatanga kukisana and soon tainge taita 69 and ndaifarira kuda kudya beche richidziya, and from nowhere zvakabva zvanzi ndirikuda kunzwa mboro yako mubeche rangu.
Sisi vangu vakabva varara nemanhede vakatarisa mudenga ndokubva ndayenda pakati pemakumbo avo ndichipuruzira mboro yangu pamuromo webeche apa nekutota kwainge kwayita beche racho ndakapushira mboro zvishoma ndisati ndainyudza ndakamutarisa mumaziso ndikati we can still stop kana uchida. Vakanditarisa back zvikanzi ndisvire mhani ndirikuda kunzwa zimboro iroro mubeche rangu, handina kuzofunga katwo ndakabva ndainyudza yese apa beche racho raidziya. Ndakakoira fast and slow, ndokutanga kuita kudzvura beche kusvikira ndakunzwa kuda kutunda. Ndakanzwa huronyo hwakuda kuuya ndikavati ndakuda kutunda zvikanzi tunda hako ndiri on a pill.
Ndakaita kudzvura beche